Nagarik Shukrabar - रिस पोख्दै सुस्मा
मङ्गलबार, ०४ कार्तिक २०७७, १२ : ०५
बुधबार, २४ असार २०७७, ०२ : ५९ | शुक्रवार
नायिका सुस्मा कार्की काम कम र विवादास्पद टिप्पणी गरेर धेरै चर्चामा आएकी नायिका हुन्। प्रायः निर्माता–निर्देशक पनि उनको काम देखेर तर्सिन सुरु गरिसकेका छन्। हातमा फिल्म छैन, भएको एउटा ब्वाइफ्रेण्ड पनि पूजाको पछाडि लट्टु छन्, गर्ने पनि के त ?
यही झाेँकमा उनी बदनाम हौं तर गुमनाम नहोऔं वाला रणनीतिमा काम गरिरहेकी छन्। केही साता अघि मात्रै पूजा शर्मालाई रुप न रङकी नायिका भनेर विवादास्पद टिप्पणी दिएकी थिइन्। यसको बदला पूजाले होइन, पूजाका फ्यानले लिएका थिए, अनेक फतुर र टिप्पणी गरेर।
तर त्यस्ता सानातिना टिप्पणीले उनलाई छोएन। उल्टै पूजा आफँैले फेक आइडी बनाएर आफूलाई धम्क्याएको आरोप समेत सुस्माले लगाइन्। ती सबै पंगा चलिरहेकै बेला पूजा शर्माको सामान्य ज्ञानसम्बन्धी कमजोरी फेला पारेपछि सुस्माले छाड्थिन् त ? छाड्ने कुरै भएन नि ! त्यसैले सुस्मा यतिबेला सबै काम छोडेर पूजाको ‘कर्तुत’ बाहिर ल्याउने र ब्वाइफ्रेण्ड खोसेको रिस पोख्ने दाउमा छिन्। यो कुरा उनको सोसल मिडियामा पुग्नेबित्तिकै थाहा भइहाल्छ। यो हो नि त मौकामा चौका हान्ने तरिका ! कसैले बदला लिन त सुस्माबाट सिकोस् !
कोरोना महामारीका कारण भएको बन्दाबन्दी अहिले खुलेको छ। बन्दाबन्दी खुले पनि सरकारले भिडभाड तथा सभा–समारोहमा रोक लगाएको छ। त्यसैले भिडभाड हुने मेला–महोत्सव अझै बन्द छ।
पलको म्युजिक भिडियो प्रेम
सबैलाई थाहा छ, नायक पल शाह म्युजिक भिडियोबाटै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्। उनको अन्तर्वार्ताहरुमा पनि म्युजिक भिडियोको बखान निकै सुन्न पाइन्छ।